Izinyawo zokugeza ezinyawo ezinhle kakhulu
Ubuhle besifazane Ukunakekela izinyawo
Kulesi sihloko sizokutshela indlela yokwenza izinyawo zokugeza. Njalo owesifazane wesimanje kumele anakekele izinyawo zakhe, futhi wonke umuntu uyazi ukuthi, bathwala ukucindezeleka okuningi. Ukususa imiphumela yomthwalo onjalo, kwavela ngezindlela eziningi, futhi enye indlela ibhati lokugeza. Ngenhlanhla, ngaphezu kwama-lotions akhethekile kanye nama-creams asusa ukukhukhumeza nokukhathala kwezinyawo, kunezindlela zokupheka ezinhle zokuhle, lezi zibhebhe ezinyawo.
Izinyawo nezinkinga ezihamba nazo Amanzi okugeza, izinhlobo zazo Ukuhlanza amathreyi Ukuphatha izinyawo zamabhati Amanzi okugeza ezinyawo ezihlukene
Misa nezinkinga nazo
Unyawo luyingxenye ephansi yonyawo, lwenza imisebenzi yasentwasahlobo nokusekela. Umsebenzi wezinyawo awubonakali, kodwa noma yikuphi ukuphulwa okwenza ukuhamba ukuhlushwa. Esikhathini sethu, izinyawo ezihlanziwe kahle zinquma ukubonakala kowesifazane futhi ziyisiqondiso senkambiso yakhe. Futhi uma kutholakala izinyosi isifo sokuhlanza i-purulent noma ku-fungus isikhumba? Ukujuluka ngokweqile kwezinyawo nakho kudala izinkinga eziningi.
Ukunikezwa kwegazi kwemilenze, njenge-venous (sinuosity and varicose veins), kanye nokuphazamiseka (ukunciphisa imithwalo yegazi) kuhlupheka. Futhi ngaphandle kokuba kube nemilenze noma ama-foot ekhangayo uma kuvela ku-veins?
Amanzi okugeza, izinhlobo zazo
Kuncike ekutheni umgomo owuphishekela wona nokuthi yini ofuna ukuyenza ngenxa yale nqubo enhle, udinga ukukhetha uhlobo lokugeza, ngoba kuningi labo.
Amabhati angaba: ukuqina ukuphulukisa, i-tonic, ukuhlanza nokunye okunye. Yonke le nqubo kufanele ibe yendalo ehlelekile, hhayi nje ibhati lokugeza, ingazuza. Ngemuva kokugeza kufanele usule izinyawo zakho, ngoba umswakama uheha le fungus, futhi ubisize ukhilimu okhethekile.
Qhathanisa amabhati ezinyawo: ukuthi ungayenza kanjani kahle
Izithukuthuku, ukukhathala, zitholwa yizinhlobo ezincane zezinyunyana, ukungcola nothuli. Ngakho-ke, izinyawo kufanele zihlanzwe njalo nge-sese futhi zihanjiswe ngamabhati okuhlanza. Uhlanza isikhumba sezinyawo zokugeza emanzini soda kanye nosawoti, ngoba lokhu kulayini wamanzi, faka isipuni esingu-1 se-sea noma i-table salt no-2 amathisipuni e-baking soda. Ubude bale nqubo buvela kumaminithi angu-15 kuya kwangu-20, senza izinqubo ezingu-10 nsuku zonke, bese kuthi 2 noma kathathu ngesonto. Esikhundleni sikasawoti, ungasebenzisa insipho yamanzi.
Amanzi okugeza ngezinyawo
Ngezimkhuhlane noma ukuvimbela amakhaza, senza amabhati ezinyawo ezishisayo ngamaminithi angu-15 noma angu-20, singanezelwa nge-mustard eyomile. Inqubo enjalo, cishe, iyaphazanyisa, ikhuthaza ukukhanga kwegazi emlonyeni wamangqamuzana kuya emilenzeni, ngaleyo ndlela ukunciphisa inqubo yokuvuvukala.
Izakhiwo ezinqamule izidakamizwa zinezibilini ze-calendula ne-chamomile, zisetshenziselwa amanxeba amancane emilenzeni. Ukuze wenze lokhu, isipuni esingu-1 se-calendula noma izimbali ze-chamomile, sigcwalisa i-1 litre lamanzi abilayo, sigcizelela imizuzu engama-30, bese sikhathaza, siphuza kancane futhi sigeza.
Ngokuzikhukhumeza ngokweqile kwezinyawo, senza okugeza ku-decoction yegxolo le-oki. Thatha izipuni ezimbili ze-oak gark ngetitha yamanzi abilayo, ubilise imizuzu engu-10, uhlunga, upholile, ubeke izinyawo zakho ekugezeni, sizowageza ngesephu ngaphambi kwesikhathi. Ubude bokugeza buyi-10 noma imizuzu engu-15. Izinqubo zenziwa ngenyanga yonke.
Qhathanisa amabhati okugeza
Amanzi okugeza ahlukene avikela emakhazeni, akhuthaze umkhuhlane futhi akhulule ukukhathala. Kulesi simo, imilenze ifakwe emakhazeni (amasekhondi amabili kuya kwangu-3), bese kuthi emanzini ashisayo imizuzwana engu-5 kuya ku-10. Sifeza inqubo emanzini abandayo. Amabhati anjalo ama-gymnastics amahle emithanjeni yegazi, enza ukuthi izitsha zande, bese zilula.
Amathreyi enqabunga ngezinyawo
Izakhiwo ezinhle ze-tonic zibhekene nesisombululo sosawoti. Kungcono ukuthatha usawoti olwandle, ngokusekelwe ku-1 ilitha lamanzi, thatha izipuni ezimbili nge-top. Amanzi kufanele afudumele kancane, isikhathi sokugeza kungamaminithi angu-15.
Amafutha abalulekile wezitshalo ezinjalo njenge-spruce kanye ne-pin, izinambuzane, ne-mint zinempahla ye-tonic. Amaconsi ambalwa amafutha abalulekile azongezwa ekugeza, okuzothululwa amanzi afudumele, sihlala emilenzeni imizuzu engu-15 noma engu-20.
Ukungahambisani nezinyawo zamabhati
Ukugeza okufudumele kwezinyawo ngokuyinhloko kuqhathaniswa nalabo bantu abanomkhuhlane omkhulu, ukuthambekela kokuphuma kwegazi, ne-hypertension. Amanzi okugeza okungafani nokwandiswa kwemithanjeni, nezinso nezinkinga zenhliziyo.
Amathreyi ezinyawo nge-sweating ngokweqile
Bhati kusuka ekudleni kwamakhemikhali
Ngokuzikhukhumeza ngokweqile kwezinyawo nsuku zonke kusihlwa senza ukugeza ngama-chamomile. Thatha izipuni eziyi-6 ze-chamomile inflorescences, ugcwalise ngamalitha amabili amanzi abilayo, umboze izitsha nge-lid futhi ufune ihora. Ukukhushulwa okunamandla kufudumele futhi siphinde sigcine imilenze kuyo, kuze kube yilapho amanzi epholile. Ngokugeza esiwasebenzisayo ne-decoction, thumba imizuzu engu-10. Ngemuva kwenqubo, izinyawo ziyi-powdered ne-boric acid ne-talc.
Uma izingcingo zibonakala emilenzeni, izipikili azihlungi kahle, ngakho imilenze enjalo ayikwazi ukubizwa ngokuthi ihlelwe kahle. Kodwa ukunakekela izinyawo zakho akubizi futhi akulula. Cishe kanye njalo emva kwamasonto amabili udinga ukubeka izipikili zakho ngokuhlelekile, futhi kungcono ukukwenza amahora amathathu ngaphambi kokulala. Imilenze ingakwazi ukuphumula ngalesi sikhathi, futhi izicathulo azikwazi ukulimaza i-varnish.
Ukwenza i-pedicure ekhaya, ungase udingeke: usawoti usawoti, ukhilimu onyawo, i-pumice, ukuhlunga, ibhasi elinamanzi afudumele, ifayela le-nails, ithawula. Njengezindlela ezengeziwe zokunakekelwa kwezinyawo, uzodinga ukushaywa ngezinyawo, induku ye-cuticle, i-cuticle yokunciphisa uketshezi, imichilo ye-raber epholile kanye nokunye okunye. Isikhumba singelashwa nge-pumice, udinga ukusihliza umswakama noma amafutha omnqumo atshisayo. Amanzi okugeza ngamanzi kuyindlela enhle yokunciphisa izinyathelo ezinyaweni.
Amanzi okugeza ezinyawo
Siyancibilika amagremu angu-20 weparafini ku-1 litre lamanzi. Ukushisa kwesisombululo kufanele kube yi-degrees Celsius engu-38. Ukusekela imilenze kusixazululo esinjalo imizuzu engu-10. Iparafini kusiza ukunciphisa ukuvuvukala futhi kusebenze ukujikeleza kwegazi. Le nqubo iphikisana nalabo ababhekene nesifo sikashukela kanye nemivimbo ye-varicose.
Bhati nge-oak bark noma nge-wise
Emalitha amanzi, engeza isipuni 1 se-sage umhluzi noma igxolo le-oki. Bamba izinyawo kulokhu kugeza 10 noma imizuzu engu-15. I-Oak bark ne-sage isenzo sokulwa nokulwa nokulwa namagciwane kusiza ukusimamisa umsebenzi wezinhlayiya zokuthuthumela.
Ibhati enezikhukhula kanye no-St. John's Wort
Thatha izipuni ezimbili ze-nettle kanye ne-St John's wort, uthele i-litre elilodwa lamanzi abilayo, upholile. Sizolayisha izinyawo zethu ingxenye yesigamu sehora ku-ukumnika okunjalo. Lokhu kubhaka kusiza ukunciphisa ukujuluka.
Bath nge soda
Thatha amathisipuni amabili e-baking soda futhi uncibilikisiwe ku-1 litre lamanzi, engeza insipho encane. Bamba imilenze kulesisombululo kuze kube yilapho amanzi esitobhini sele selehlile. Emva kokugeza ngezinyawo izinyawo zizocinywa ngokunyakaza okucophelela ngethawula elifudumele. Ukunyakaza kwe-cyclic kususa ama-calluses emiphakathini encane yezithupha nezisithende. Lezo zindawo zesikhumba eziye zaqina, zidinga ukususwa ngokucophelela zisebenzisa i-pumice. Bese ususe nge-actic pedlicure cutter cuticle. Sifaka indlela yokunciphisa i-cuticle, bese uyixosha ngenduku yokhuni.
Sika izipikili ezinyathelweni ezincane ukuze ukwazi, bese ugwema inkinga. Lapho sihlanza i-nail groove, khonqa ngokucophelela izipikili ezinefayela le-nail. Uhlobo oluhle lwezipikili emilenzeni yilapho izinyosi ziqonde ngqo emlenzeni omkhulu, futhi kwezinye izinzwane, izipikili zihlangene. Ekugcineni, kumele uqale ufake isicelo se-varnish kuqala, bese u-lacquer umbala.
Amanzi okugeza ezinyawo ezise-Soda
Esikhathini sesisombululo esishisayo se-soapy, engeza amathisipuni amabili e-soda. Lokhu kugeza okuhlanza, ngaphambi kokuhamba nge-pedicure, kuthatha imizuzu engaba ngu-10 ngenkathi amanzi ashisayo anele.
Amanzi okugeza ngamapomegranate
Thatha i-1/2 indebe yamapomegranate ikhasi, ugcwalise ngamanzi ashisayo ngesamba sika 300 ml, bese uwabeka emlilweni omncane esitsheni esincane. Ngemuva kwemizuzu engu-15, i-decoction isusiwe kusuka epulatifini futhi siyivumela ukuthi iphuze imizuzu engu-30. Gwema bese ufaka emanzini ashisayo okugeza. Ukwamukela kungakapheli imizuzu eyi-15 yokugezela okunjalo kuzokusiza ukuba unciphise amandla adonsela phansi kanye nokukhathala.
Amabhati anjalo anciphisa ukujuluka nokukhulula ukukhathala. Sinempahla yokubulala amagciwane, futhi iyoba kuhle kulabo bantu abaye bahlambalaza, amanxeba, futhi bagubha ezinzwaneni zabo noma ezinyaweni zabo. I-isipuni esisodwa semifino ye-chamomile isetshenziselwa ilitha lamanzi abilayo. Ngemuva kwemizuzu engu-30 umhluzi uhlungwa futhi senza ukugeza okufudumele kwezinyawo, imizuzu engu-15 noma engu-20.
Amanzi okugeza ngamanzi usawoti kanye ne-rosemary amafutha
Lona umuthi omkhulu wokugqoka unyawo lokuzivikela, kuhle kakhulu. Yenza ekuseni, uma kufanele uchithe isikhathi esiningi ezinyaweni zakho noma wenze usuku lokuzalwa. Emanzini afudumele, engeza amaconsi ambalwa e-rosemary amafutha abalulekile mayelana namaconsi angu-4 noma ayisithupha bese uhlanza kuwo isipuni esisodwa sikasawoti. Ngemuva kwemizuzu engu-10 noma engu-15 izinyawo zakho zizothola kalula, futhi uzothola inkokhelo ye-vivacity.
Izimangaliso zingaba yizinyawo ezilula ezihlukene, ezithuthukisa ukujikeleza kwegazi. Cishe ngomzuzu simile emakhazeni ngamanzi angama-20 degrees, bese kuthi iminithi emanzini ashisayo, sizophindaphinda izikhathi ezingu-5, siqede ebhuku lokushisa.
Ukugeza okumanzi ngezinyawo
Brew peppermint bese wenza ibhati lokugeza, ubambe izinyawo zakho imizuzu engu-20. Ngemuva kokugeza, isithende sibhekwa nge-pumice noma ukuhlunga. Sizofaka imaski noma ukhilimu.
Bath for softening isikhumba imilenze
Sidinga isobho eliqinile noma eliketshezi, isipuni 1 se-baking soda ne-ammonia. Konke kuncibilika ekugezeni ngamanzi afudumele. Bamba imilenze kulokhu kugeza ngamaminithi angu-15. Khona-ke sizoyomisa izinyawo zethu futhi sizosusa ipumice noma ifayili ngezinyawo.
Ukupheka okukhethekile ngezinyawo.
Nciphisa isikhumba esibi
Ukuze unciphise ibhodlela sidinga izipuni ezintathu noma ezine zobumba obumhlophe, okunciphisa isikhumba sezinyawo bese kuthobisa i-burrs. Faka ubumba emgodini ngamanzi ashisayo. Sinciphisa imilenze ekugeza futhi sibambe imizuzu engu-15 kuya kwangu-20 emanzini, bese ugeza ngamanzi afudumele.
Kanciphisa kahle isikhumba samanzi okugeza ubisi olufudumele. Ngemuva kwemizuzu engu-10 noma engu-15 emva kokuthatha amanzi okugeza, sizosusa izinyawo zethu futhi sibophe ithawula, khona-ke sizosusa izinyawo ngepende lekhasi lemon. Imisindo iyoba yethenda futhi ibushelelezi, njengengane yomntwana.
Sizofaka amazambane ama-2 aphakathi, futhi ngomusa ofudumele esizogubha ngemfoloko, sizofaka ubisi. Ukunamathiswa okuzoholela ezinyaweni futhi kugoqwe ngefilimu ye-polyethylene, sizobeka amasokisi phezulu. Ngemuva kwesigamu sehora sigeza ngamanzi afudumele. Ukuze unciphise isikhumba semilenze, sebenzisa umquba owenziwe nge-oatmeal nobisi.
Amathrekhi avela kumatashi
Thatha ilitha elilodwa lamanzi afudumele, 50 ml weoli yama-pine, ama-gramu angu-50 we-starch. Sihlanza isitashi ngamanzi afudumele, engeza amafutha ephayini, wehlisa imilenze imizuzu engu-20 ebhodini. Emva kokugeza ugeza izinyawo zakho ngamanzi afudumele, bese ubomisa bese usula nge ukhilimu.
Thatha ilitha elilodwa lamanzi afudumele, u-5 ml wamafutha we-sage, 50 amagremu we-starch isitashi. Hlanganisa isitashi ngamanzi, engeza amafutha. Beka izinyawo zakho ekugezeni ngamaminithi angu-20 bese uwageza ngamanzi afudumele.
Kuhle ukukhipha ama-callus nokuphahla esikhumbeni.
2 ml amafutha omswakama, 5 ml wamafutha we-castor, 1 ilitha lamanzi. Sihlanganisa amafutha futhi siwavumele ekugezeni okufudumele, bese sinciphisa imilenze lapho. Ngemva kwemizuzu engu-15 hlambulula izinyawo zakho ngamanzi afudumele.
3 ml we-lavender amafutha. 20 ml wamafutha omnqumo, ilitha lamanzi afudumele. Kudingekile ukuyixuba konke bese uyibeka embhedeni wemizi ngemizuzu eyi-15, bese ugeza izinyawo zakho ngamanzi afudumele.
5 ml amafutha a-orange, 50 ml wamafutha yemifino kanye nelitha elilodwa lamanzi. Ukuxuba amafutha ngamanzi afudumele, sigeza ngamaminithi angu-15, bese ugeza izinyawo zethu.
5 ml amafutha e-almond, 20 ml wamafutha yemifino, ilitha lamanzi afudumele. Sixuba amafutha, sizowahambisa emanzini afudumele. Sizogeza ngamaminithi angu-15 bese ugeza izinyawo zakho ngamanzi afudumele.
1 litre lamanzi afudumele, 10 ml we-oyela rose. Sizofaka amafutha emanzini afudumele futhi sizokwehlisa imilenze. Ngemuva kwemizuzu engu-10, uqede inqubo, hlambulula izinyawo zakho ngamanzi afudumele.
5 ml weoli coniferous, 2 ml wamafutha lavender, 1 litre lamanzi afudumele. Hlanganisa amafutha bese uwavumela ekugezeni okufudumele. Masiphonte imilenze yethu imizuzu engu-15, bese usuhlanza ngamanzi afudumele.
Manje siyazi ukuthi yikuphi okugeza okuhamba phambili kwezinyawo. Ukusebenzisa lezi trayizi, sizokwenza isikhumba semilenze sibe nethenda futhi sihle.
Izifo zemilenze ekhandlayo
Cure ucingo olomile emilenzeni
Amafungus of foot and toes
Ukwelashwa kwemithi yesintu ekhishwe ezithende
Indlela yokwenza amabhati ezinyawo lwesinaphi
Susa ukukhathala nokuvuvukala ezinyaweni
Ukwelapha nokuvikelwa kwe-tonsillitis engapheli
Abaduduzi abadume kakhulu emlandweni
Kunzima yini ukuthi owesifazane asebenze njengomphenyi
Indlela yokuvusa isithakazelo kumuntu wentombazana
UNikolay Karachentsov waphinde wangena engozini
Ukondla umama onesihlengikazi
Ukubukeka okubuyiselwayo: okuyinhloko yenkambiso, izinkomba, ukuphikisana
Ukuthunjwa kukaKhisimusi - ukubhula ngoKhisimusi ku-saucer
Mousse ushokoledi nge okusajingijolo
Indlela yokuthola uthando emva kwesahlukaniso
Isibalo esincane futhi isikhumba esithintekayo inyanga eyodwa
U-Alexander Panayotov waziqhenya ngezipho ezibizayo ezivela kubalandeli
UVera Brezhneva uvikela umyeni wakhe ekuxabaneni noMAND
Indlela yokusebenzisa amafutha abalulekile